जनप्रतिनिधिको द्वन्द्वमा स्थानीय विकास चौपट ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
जनप्रतिनिधिको द्वन्द्वमा स्थानीय विकास चौपट ! (भिडियो)
धनुषा, १५ माघ । जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिष्ठाको लडाइँका कारण स्थानीय सरकारका काम कारबाही प्रभावित हुने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । उनीहरुको स्वार्थको लडाइले गर्दा हजारौँ नागरिकहरुले दुःख पाइरहेका छन् ।
यस्तै नियत दोहरिएको धनौजी गाउँपालिकामा । जहाँका जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठानको लडाइले गदाई गाउँपालिकाको कामकाज डेढ महिनादेखि ठप्प छ ।
चालू आर्थिक वर्षको करिब ६ महिना बित्न लाग्दा कुनै पनि विकास निर्माणको काम शुरू हुन सकेका छैन् । तलब नपाएपछि कर्मचारीहरु कार्यालय आउनै छाडेका छन् । जस्को प्रत्यक्ष असर त्यहाँका स्थानीयमा परेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिष्ठाको लडाइका कारण धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाको कामकाज डेढ महिनादेखि ठप्प रहेको छ । जनप्रतिनिधिको लडाइका कारण गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले विगत छ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै उनीहरुको कार्यालय आउँन छोडेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कन्हैयाकुमार मिश्रलेजानकारी दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को शुरूदेखि नै तलब नपाएपछि कर्मचरीहरु कार्यालय जान छाडेको उनको भनाइ छ । करिब ४०/४५ दिनदेखि अत्यावश्यक बाहेक सबै काम ठप्प छ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय आउन मानेका छैनन् ।’ तलब निकासा नभएसम्म कार्यालय ठप्प रहने उनको भनाइ छ ।
प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिकाले तलब निकासा नदिएको बताएका छन् । बहुमत जनप्रतिनिधिले तलब रोक्न निवेदन दिएको भन्दै कोलेनिकाले तलब रोकि दिएपछि कर्मचारीले तलव मिश्रले बताउँने गरेका छन् ।
गाउँसभा नभएसम्म तलब निकासा नदिन बहुमत जनप्रतिनिधिले कोलेनिकामा निवेदन दिएको मिश्रले जानकारी दिए । जनप्रतिनिधिबीच आ–आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट लैजाने होडबाजीका कारण गाउँपालिकामा विवाद बढेको हो ।
‘मेयरले आफ्नो पक्षको वडाध्यक्षलाई प्राथमिकता दिनेगरेको भन्दै एक–अर्कामा नै विवाद बढेपछि गाउँपालिकाका का कारबाही प्रभावित भएको स्थानीयहरुको भनाइ छ । तलब नपाएपछि शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलित बनेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ शुरू भएदेखि तलब नपाएको धनौजी गाउँपालिका ४ स्थित राप्राविका प्रधानाध्यापक अनिलकुमार साहको दुखेसो छ ।